लोकस्टारको प्रचार एड प्याडले गर्ने – Rajdhani Daily
काठमाडौं । एएनएसको सहायक कम्पनि एड प्याड प्रालिले चाहना मिडियाको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल लोकस्टारको प्रचार प्रसार गर्ने भएको छ ।
आधिकारिक एजेन्सीको रुपमा काम गर्ने गरि बिहीवार एड प्याडका निर्देशक सरोज बस्नेत र चाहना मिडियाको तर्फवाट अध्यक्ष सहदेव कोइरालाका बिच सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । नेपाल लोकस्टार नेपालीहरुको आफ्नै मौलिकता झल्कने नेपालकै पहिलो रियालिटी शो हो ।
यसले देशको कुना कुनामा लुकेको लोक प्रतिभालाइ उजागर गर्ने उदेश्यले यो कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । कार्यक्रमका निर्णायकमण्डलमा जय नन्द लामा, बि. बि. अनुरागी, रामजी खाँड र सुनिता दुलाल रहेका छन् ।
कार्यक्रमको होस्ट मिस नेपाल इन्टरनेसनल २०१२, शुभेक्षा खड्का र लोक गायक अशोक धिताल रहेका छन् । रोमान्चक ढंगले आयोजित सो कार्यक्रममा साइलेन्ट अडिसन, ओपन अडिसन र जज अडिसनको छनौट प्रक्रिया हुनेछ ।
नेपालकै पहिलो एचडि र आधुनिक प्रबिधि युक्त च्यानल एपीवानवाट जेष्ठ २५ गतेबाट हरेक हप्ता शनिबार र आइतबार प्रशारण गरिने भएको छ । यस कार्यक्रममा ३१ शृंखला रहने र तेश्रो, दोश्रो र पहिलो बिजेताहरुलाइ क्रमश दश लाख, पच्चिस लाख र पचास लाख नगद पुरष्कार प्रदान गरिनेछ ।